Fepetra eto Analamanga :: Halevina eny Anjanahary ireo razana tsy afaka mivoaka ny faritra • AoRaha
Isan’ny fepetra lehibe iray, indrindra raha mijery ny fomba malagasy, ao anatin’izao famerenana ny fihibohana eto amin’ny faritra Analamanga izao ny fandraràna ny fanomezan-dalana handevina ivelan’ny faritra. Fantatra, omaly, fa etsy Anjanahary no toerana iray efa nahazoana toromarika amin’ny fandevenana an’ireo razana izay tokony haterina any amin’ny fasandrazany nefa ivelan’Analamanga.
Toerana nomen’ny kaominina Antananarivo renivohitra ho azo ampiasaina mba hampiharana an’io fepetra io ny eny Anjanahary. Hatramin’ny omaly alina ny fivoriana izay namariparitana ny fombafomba rehetra harahina amin’izao fepetra fandevenana manokana izao, araka ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray manaraka an’ity raharaha ity.
“Misy ny fiaraha-miasa amin’ ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH) mikasika ny toerana eny Anjanahary. Malalaka ny eny matoa ry zareo manome azy”, hoy ny jeneraly Andriankaja Olivier Elack, mpandrindra ankapoben’ny Ivon-toeram-pibaikoana amin’ny ady amin’ny Covid-19 (CCO), omaly.
Nanazava kosa ry zareo avy ao amin’ny BMH fa hamoaka, tsy ho ela, an’ireo andinindininy sy ny fepetra rehetra tsy maintsy arahin’ireo mana-manjo. Nitohy hatramin’ny omaly hariva ny famaramparanana ny fandrafetana an’ireo pitsopitsony mikasika an’izany.
Halatra sy fandrobana :: Tratra ireo dimy lahy mpamaky trano isak’alina
Fanjifana tambavy :: Nampidina ny vidin’ny CVO ny IMRA